ALAROBIA 26 FEBROARY 2020
VOLAVOLAN-DALANA MIFEHY NY TETIBOLA 2020 : Andrasan’ireo solombavambahoaka fatratra
Araka ny fanazavana noentin’ny Minisitry ny Vola sy ny teti-pivoarana dia mety ho any amin’ny faran’ny volana any ho any io lalàna mifehy ny tetibola io vao ho tonga eny am-pelatanan’ny parlemanta. 17 octobre 2019
Heverina fa mbola handalo fandinihana lalina ny mahakasika io volavolan-dalàna io, ka antony mahatonga ny halavam-potoana tahaka izany. Ankilany, ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Christine Razanamahasoa anefa dia nangataka ny handefasan’ny fahefana mpanatanteraka io volavolan-dalàna io alohan’ny fotoana mba hahafahan’ny solombavambahoaka mandinika azy.
“Hatramin’izao aloha mbola tsy tonga eo am-pelatanan’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola, inoana kosa nefa fa tsy maintsy ho tonga izany na tsy mbola amin’io fivoriana io aza”, hoy ny nambarany. Ankoatra izay, nohamafisiny fa mba tsy hisian’ny olana amin’ny fandaniana an’io lalàna io dia ilaina ny fahatongavan’izany mialoha mba hahafahan’ireo Solombavambahoaka mamaky tsara amin’ny antsipiriany ireo andinin-dalàna ao anatiny. “Ny zavatra angatahinay dia mba handefasana any aminay mialoha ny lalàna mahakasika ny tetibola sy ny vola satria ireny mazana no mampisy olana ao amin’ny antenimieram-pirenena, tsy afaka mamaky azy akory ireo depiote ka na lalàna tokony ho lany izao aza manjary mety tsy ho lany rehefa tsy voadinika tsara”, hoy hatrany ny fanazavany. Raha tsiahivina dia ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2020 no tena hiompanan’ity fivoriam-be ara-potoana faharoa an’ireo Parelemanta ity.
Nambaran’izy ireo fa isany tena zava-dehibe ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana io satria hiankinan’ny fampandehanan-draharaha maro eto amin’ny firenena. « Tena zava-dehibe ny fandinihana ity tetibolam-panjakana ity satria tsy maintsy arahina avokoa ireo pitsopitsony ara-panjakana rehetra », hoy ny fanazavan’ny Depiote Rasolonjatovo Honoré na Papasolo, filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an’ny faritanin’Antananarivo. Nambarany koa fa efa « efa miomana amin’ny fandanihana izany ny depiote manana ny maro an’isa ao amin’ny antenimieram-pirenena na tsy mbola tonga eo am-pelatanan’izy ireo aza izany tetibola izany ».
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68235) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (402) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (178) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (92) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (82) 21 février 2020